कोरोना पनि तर्सिए होला !
byShyam Rana magar - November 25, 2020
कोरोनाबाट बच्न मास्क लगाउनुपर्छ । भीडभाडमा जानु हुँदैन । भौतिक दुरि कायम गर्नुपर्छ । यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो । दिनको कम्तिमा एकचोटी तपाइ फोनकलमा आफ्नो प्रियजनसँग पक्कै कुराकानी गर्नुहुन्छ । त्यहाँ पनि कोरोनाबाट बच्ने तरिका सुनाइन्छ । साना नानी बाबुलाई पनि कोरोनाबाट जोगिन मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ । भीडभाडमा जानु हुँदैन भन्ने बुझि सकेका छन् । सरकारले पनि यस्तै उर्दी जारी गरेको छ ।
कोरोना सन्त्रासले ९, १० महिनै भै सक्यो । त्यति साह्रो भीडभाड देखिएको पनि छैन । कामै परे निस्कने हो । नत्र त घर बाहिर निस्किन पनि डर छ ।
नबुझेर हो या बुझ पचाएर हो !
आज पोखरामा अचम्मै भो । बाटै भरिने गरि बाइक, स्कुटीमा ‘राजा आउ, देश बचाउ’ भन्दै एक हुल मान्छे ओर्लिए । बाइकमा अलि अघिल्लो लाइनमा तातो रगत भएकाहरु । त्यसपछिको लाइनमा भ्यान, टिप्परमा अर्को हुल इनर्जी सकिन लाएकाहरु फुर्तिसाथ निस्किए । अमरसिंह चोकबाट निस्केको रैछ त्यो हूल । पृथ्वीचोक, मुस्ताङचोक, लेकसाइड हुँदै चिप्लेढुंगा मानव अधिकार चोकसम्म पुग्यो ।
बाइकका प्या, पुँ आवाजले आज पोखरा धेरैपछि जाग्यो । राम्रै भयो ।
करिब एक हजार बढी मान्छे होलान् । खुब फुर्तिसाथ राजालाई देश बचाउन आउ भन्दै उफ्रिए ।
ए, बाबा हो
राजा त आफ्नै कुर्सि बचाउन नसकेर नारायणहिटी छोडेर गएका हैनन् र भन्या । देशलाई कसरी बचाउलान् ?
यत्रो भीड देखेर नि कोरोना पनि तर्सियो होला हौं । न सामाजिक, न भौतिक दुरि । मास्क पनि लगाउन नपर्ने । यसरी कोरोना रोकथाम होला त ।
ल, ठिकै छ मैले मानें । राजा आएर देशै बचाउलान् रे ! राजा नआए पनि कोही न कोही त आउनै परेको छ देश बचाउन । नेताहरुले बर्बादै बनाए ।
पैला सावधानी अपनाऔं । कोरोनालाई भगाऔं ।
त्यसपछि बोलाउला नि राजालाई हुन्न ?
प्रहरी मामाहरु नि के भाका हुन् हो । भान्जाहरुलाई पछि रमाइलो गरम्ला भने पनि हुने नि ! उल्टै, पहरा दिएर बस्दिने के । अस्ति भर्खरसम्म त मास्क नलगाएको भन्दै सर्वसाधारणसँग सय रुपैयाँको चिट काटेको हैन र !
Unknown December 7, 2020 at 9:56 PM